Lapho igundane liyeka ukusebenza, yini okufanele siyenze? Ngivela kwa-mac
Okufanele ukwenze uma igundane liyeka ukusebenza
Ezimweni eziningi lokho okufinyeleleka okuncane okuhambisa isikhombisi esikrinini kungaba njalo yenza kubalulekile emisebenzini enjalo yansuku zonke njengokukopisha amafayela, ukuwahambisa noma ukuvula nje iwindi, konke ngesikhathi esifushane kakhulu. Kepha kuthiwani uma isikhombisi simisa ngokungazelelwe noma sinyamalale ngqo esikrinini.
Imvamisa lapho lokhu kwenzeka sihambisa igundane ngokushesha kuye hambisa isikhombisi esikrinini noma imvamisa siyihambisa kwelinye lamakhona ukuze sikuthole endaweni elungisiwe yize uma kukhona ukungqubuzana lokhu kungeke kusize.
Iphoyinti lokuqala okufanele libhekwe yi-hardware yegundane uqobo, ukubheka ukuthi ukuxhumeka kunephutha yini futhi kuzama ukuhlola elinye (uma sinalo esiseduze) okungcono ukukuxhuma nge-USB ukukhipha ukwehluleka ekuxhumekeni okungenantambo. Ukunyamalala kwegundane kungenzeka futhi kungenxa yokufihlwa kwesikhombisi uqobo ngenxa yohlelo lokusebenza, okusho ukuthi, uma sibuka ividiyo kusikrini esigcwele kungenzeka ukuthi ezinye izinhlelo zifihle isikhombisi futhi ngeke siphinde sitholakale lapho sihanjiswa , kulokhu kuzokwanela ukucindezela I-CMD + Tab ukushintshela kolunye uhlelo lokusebenza bese uzama ukuyibuyisa.
Uma lokhu kungasebenzi noma isikhombisi sisavela futhi sinyamalale ngokuzumayo, lapho-ke singaphendukela ku inhlanganisela ye-CMD + Q futhi lapho isibuza ukuthi sifuna ukuvala uhlelo, sizovuma, ngoba kungenzeka ukuthi kuphazamisa indlela efanayo yegundane.
Ekugcineni, njengesilinganiso "esinamandla", singashiya sicindezelwe Inkinobho yokulawula namandla bese kuthi ibha yesikhala ukhethe ukuqala kabusha ikhompyutha bese uyihlola uma ngabe kube ukuhluleka kohlelo ngaleso sikhathi.
Imininingwane engaphezulu - Khombisa amafayela ento yakamuva ngaphandle kokuwavula
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Izesekeli » Okufanele ukwenze uma igundane liyeka ukusebenza
Nginenkinga yokuthi kweminye imidlalo angikwazi ukuhambisa noma yini kukhibhodi ngoba ayisebenzi emdlalweni
UJose Miguel Secadas kusho
Isikhombi seMagic Mouse asinyakazi kodwa uma sixhuma kahle ne-bluetooth, empeleni siyinkinga, ngina-4 Macs futhi i-pointer isebenza no-one.
Phendula uJosé Miguel Secadas
Bekulukhuni kimi ukwenza igundane lomlingo we-apula lingisebenzele, isikhombisi asihambisi asihambi ngaphesheya kwesikrini, ngivalelekile ngoba ngiyasidinga impela futhi ngingabonga uma othile engangisiza.
UJose Miguel Secadas
Phendula uJose Miguel Secadas
URodrigo Amaya kusho
UJosé Miguel Secadas Nginenkinga efanayo negundane lami lomlingo, ulixazulule kanjani, uma kungenzeka, ngiyabonga
Phendula uRodrigo Amaya
UJose Miguel womile kusho
Akukho okunye engingakwenza ngaphandle kokuthi ngiyilahle yize ngizibekele yona, ngifune usizo ngingalishayi nokuyilapho umuntu ephoxeka khona kula maqembu lapho umuntu ebeka khona umdlandla ongaka.
UJose Miguel womile
SAUL SANTAN kusho
NGINEZINKINGA NEGUNDA NGOBA LIYAQHUBEKA KU-BEAT FUTHI KUFANELE NGIQALA UHLELO NGASO SONKE ISIKHATHI FUTHI LOKHO KUNGIKHATHAZA NGOBA KUNGENZEKA.
Phendula u-SAUL SANTAN
U-Eduardo Bayo kusho
UMGOMO ENGIWUSEBENZISAYO UWIRIWE KANYE NGOKUSUKELA EMZUZWINI NGIQALA UKUBA NGUMQONDISI OBUKHULU EKUPHAKAMENI, KUHLALELA ISIPHENDULO ESIKrinini SOKUQOLA AMAWINDI ASEVULIWE BABUYISELE KUSayizi WABO WOKUQALA, KODWA NGESIKHATHI. INKOMO INESIKHATHI ESINGAKANANI NJENGOBA NGAYITHENGA, BESE NGINEMINYAKA EMI-3, UKUSETSHENZISWA KWAYO NGOKUQHELEKILEYO, NGISEBENZISA Igundane KOBUSO OBUTHOLAKALA NJALO KUHLANZEKA UTHULI, UMGOMO ENGIWUHLANZA NGAPHANDLE INYANGA YONKE, KODWA NGAPHAKATHI KWAMI NGEKE NGIKWAZI, NGOBA ANGAZI UKUTHI NGIYIVULA KANJANI, UKUTHI NGIYIHLANJULA KANJANI NGOMBHALI NOMA NGU-MINI VACUUM CLEANER, NGOKUSETSHENZISWA KWE-ELECTRONIC APPLICES. Ungangisiza noma ungeluleke ukuthi yini okunconyelwa kakhulu, uma ngabe uyilahla kude, uyibukeze noma uthenge entsha? NGIYABONGA, KUSUKA ECOSTA RICA.
Phendula u-Eduardo Bayo
Thony Velez kusho
mause wami ukuchofoza kushesha kakhulu noma kwesinye isikhathi akusebenzi okwedlule ngicela ungisize
Phendula uThony Velez
Inkinga yami ukuthi isikhombisi asihambi ngegundane lami lomlingo, kufanele ngikwenze ngqo kusuka kwi-laptop yami. Kepha into ehlekisayo ukuthi yonke eminye imisebenzi yegundane lomlingo isebenza ngaphandle kwenkinga.
Sengivele ngibheke ukumiswa kusuka kokuncamelayo kohlelo lwekhompyutha yami, futhi konke kubonakala kukuhle, ibhethri, ukuxhumana, ukusebenza, njll ... Angikwazi ukuhambisa isikhombisi noma ukuzibeka kokuthize, ngakho-ke, ngokusebenzisa igundane lomlingo. Kuzoba yini?
UKike Cardenas kusho
Igundane lami ALENZI "ukwenza noma yini" ... ngivule ikhompyutha yami futhi ayilitholanga, ngibheke igundane futhi ALIKHONA, ngishintsha amabhethri futhi alivuli namanje "lifile". .. Yini okufanele uyenze, kulezi zimo ??
Phendula ku-Kike Cárdenas
IROLANDO CABRERA kusho
Inkinga yami igundane le-USB. Kwenzeka into efanayo, kwesinye isikhathi iyanamathela noma ivele inyamalale bese iqhubeka nokusebenza. Lokhu akwenzekanga phambilini, kuzicelo ezifanayo, ngakho-ke akuhlangene ngalutho nesicelo. Akuyona inkinga yegundane ngoba uma ngixhuma noma iyiphi igundane le-USB, kwenzeka into efanayo. Into ehlekisayo ukuthi ngegundane le-bluetooth akwenzeki, kusebenza ngaphandle kwezinkinga, kepha njengoba ngisebenzisa iRazer naga enezinkinobho eziyi-18, ayingisizi ukusebenzisa i-bluetooth
Phendula ku-ROLANDO CABRERA
I-Apple yenza ukutholwa okukhulu kunakho konke emlandweni wayo
Hlangana neGrapher, insiza yezibalo ye-OSX